Nchịkọta ọdịnaya: Njikwa eCommerce End-to-End maka ndị na-ere ngwaahịa na ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa ọtụtụ ọwa maara mkpa ọ dị ọdịnaya ngwaahịa ziri ezi, mana yana iri puku kwuru iri puku peeji ndị agbakwunyere na weebụsaịtị ha kwa ụbọchị site na narị narị ndị ahịa dị iche iche, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume iji nyochaa ya niile. N'akụkụ dị iche iche, ụdị na-ejikarị ihe ndị dị mkpa eme ihe, na-eme ka o siere ha ike iji hụ na ndepụta ọ bụla na-adị ugbu a.
Okwu a bụ na ndị na-ere ahịa na ụdị ahịa na-anwa ịmekarị nsogbu nke ọdịnaya ngwaahịa na-adịghị mma site na itinye n'ọrụ otu ụzọ. Ha nwere ike ịnwe teknụzụ nyocha na-enye nghọta n'ime nsogbu na ndepụta ngwaahịa, mana ha anaghị enye ngwaọrụ iji dozie nsogbu ọdịnaya ya. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na ụdị ahịa nwere ike ịnwe syndicator ọdịnaya nke nwere ngwaọrụ iji jikwaa ma dezie nsogbu ọdịnaya ngwaahịa, mana egosighi kpọmkwem ozi chọrọ mmelite yana otu esi emelite ya.
Ndị na-ere ahịa na ụdị ndị ha na-arụ ọrụ chọrọ nyocha na njikwa ọdịnaya ngwaahịa iji nye ndị ahịa ozi ha chọrọ iji nyocha nke ọma na ịzụta ngwaahịa n'ịntanetị. Nchịkọta ọdịnaya bụ nke mbụ na njedebe njedebe eCommerce na-ejikọ nchịkọta, njikwa ọdịnaya na ịkọ akụkọ niile n'otu ikpo okwu, na-enye uru maka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ha.
Nchịkọta ọdịnaya maka ndị na-ere ahịa: VendorSCOR ™
VendorSCOR ™ bụ ngwa ọrụ na-enye ndị na-ere ahịa ikike ka ha mee ka ndị na-ere ha zaa ajụjụ maka ngwaahịa ngwaahịa ha debere na saịtị ha. Ngwọta izizi na ụdị nke ụdị ya, VendorSCOR na-enye ndị na-ere ahịa ohere igosi ndị na-ere ha ihe mpaghara chọrọ nlebara anya na dezie, na -echeta ogo saịtị ma na-akwalite nkwukọrịta zuru oke na netwọkụ ha niile. Maka ụdị aha, VendorSCOR na-enyere ha aka iji hụ na ibe ha dabara na ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-achọ, na-eme ka iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ọnụego mgbanwe.
Na VendorSCOR, ndị na-ere ahịa nwere ike izipu ndị na-ere ahịa akara akara na ogo nke ngwaahịa ha ọ bụla kwa izu, na-enyere ha aka ịhụ na ọdịnaya ha na-ezute mgbe niile maka ndị na-ere ahịa ma bụrụ nke kachasị mma maka ndị ahịa. Site na iji mmịpụta data weebụ, ngwá ọrụ ahụ na-awagharị saịtị iji chọpụta ọdịiche, njehie na ihe ndị na-adịghị na ọdịnaya, dị ka ihe oyiyi efu, nkọwapụta ngwaahịa na-adịghị mma, enweghị ntụle na nyocha, na nsogbu ndị ọzọ na-emetụta okporo ụzọ na ntụgharị. Ngwaọrụ ahụ na - enyere ndị na - ere ahịa aka ibute ihe idozi ma na - enye nghọta na - arụ ọrụ na usoro iji melite ọdịnaya ahụ.
Ozugbo ndị na-ere ahịa ghọtara ihe esemokwu ahụ na ọdịnaya ha na ohere maka imeziwanye, VendorSCOR na-enyere ụdị aka ịme mmelite dịka. Nchịkọta Ọdịnaya 'ngwa ọrụ PIM / DAM siri ike na-enye ndị ụdị ohere ịchekwa na dezie ọdịnaya ngwaahịa, kamakwa hụ otu ha nwere ike isi bulie ngwaahịa ọ bụla maka ọchụchọ. Site n'ebe ahụ, ụdị nwere ike ịkọwapụta ngwa ngwa ngwaahịa ha na ọwa ahịa ha niile na usoro dabara adaba, na-ahụ na nkwekọ na izi ezi gafee nyiwe.
Site n’inye ndị na-ere ahịa ngwaọrụ ha chọrọ iji hụ na saịtị ha nwere ọdịnaya ngwaahịa mara mma, VendorSCOR mechara nye ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa aka ọrụ ọnụ iji gbasaa ahịa ma nyefee ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Target, otu n’ime ndị na-ere ahịa mbụ buru ibu iji jikọta ya na nchịkọta nchịkọta na akara VendorSCOR, ga-elekwasị anya na iji ngwa ọrụ iji meziwanye tupu oge ezumike 2017. Ndị na-ere ahịa, dị ka Target, na-echigharịkwuru VendorSCOR iji nyere aka mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa maka ndị ọrụ ha dị n’ime, ụdị ha na, nke kachasị, ndị ahịa ha.
Na ijikọta nchịkọta na njikwa ọdịnaya bụ isi ihe dị mkpa iji lanarị ma merie na asọmpi ahịa asọmpi taa. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa anaghị enye ndị ahịa ozi ha chọrọ iji zụta, ha ga-agarịrị nke ga-eme ya. Ọ bụghị naanị na VendorSCOR na-enyocha nsogbu, kama ọ na-enyekwa ndị na-ere ahịa na ụdị ndị ha na ha na-emekọrịta ihe ngwọta na omume enyi na-edozi iji dozie ya. Kenji Gjovig, VP nke mmekọrịta na mmepe azụmaahịa na nchịkọta ọdịnaya
Nchịkọta ọdịnaya maka ụdị: Akụrụngwa Mbugharị Nke Mbụ maka fordị
Dị maara nke ọma na ndị na-ere ahịa na-agbanwe ọnụahịa na obere ọkwa, mana na-enweghị ọgụgụ isi sọftụwia iji kwekọọ ọsọ nke algorithms nke ndị na-ere ahịa, ha enweghị ike ịchọpụta nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị kwagara ọnụahịa ahụ na ole ọ gbanwere.
Nchịkọta Ọdịnaya 'Nke mbụ Mover Report na-enyocha ọnụahịa nke ngwaahịa ndị yiri ya gafee ọtụtụ saịtị ndị na-ere ahịa na ezigbo oge, na-achọpụta ma na-akọ akụkọ otu ndị na-ere ahịa na-agbanwe ọnụego ha na ndị kwagara mbụ. Dịka mgbakwunye na-enweghị ntụpọ na akụkọ MAP ​​dị ugbu a na mkpesa ọnụahịa MSRP, Akuko Mbugharị Mbụ na-enyere ụdị aka ịmata ma soro oke mmelite ohere wee hụ ọnụego ziri ezi n'ofe ọwa niile.
Ọmụmụ Ihe Omume: Mattel
Tupu ya na ndị nyocha ọdịnaya, Mattel enweworị atụmatụ elebara anya na njikwa omnichannel, mana enweghị akụrụngwa iji jigide atụmanya ndị ahịa na-achọwanye maka ahụmịhe n'ịntanetị.
Iji melite ahịa ma chekwaa akara ngosi akara ntanetị, Mattel tụgharịrị na nchịkọta ọdịnaya iji mepụta atụmatụ atọ omnihannel maka azụmaahịa eCommerce ha, gụnyere:
Vingkwalite ọdịnaya ngwaahịa site na ịdepụta aha na nkọwapụta ngwaahịa, yana ịgbakwunye isiokwu kachasị mma ọchụchọ, foto na vidiyo
Mbelata nke ọnụego-site na ịnwepụta ọhụhụ oge ka ọ bụrụ na ngwaahịa anaghị apụ ahịa
Inye ego na uzo ahia ndi ozo site na imejuputa akuko na nyocha iji nyere aka ghota uzo kachasi zuo uzo
Site na ịkọwa isi ihe mgbu atọ a, nchịkọta ọdịnaya nwere ike melite ahụmịhe Mattel na akara ala. Specific metrik gụnyere:
Kachasị ọdịnaya nke 545 SKU ya kachasị elu, ruo n'ókè nke ha nwetara Nlekọta Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnaya nke 100% na ihe ọ bụla
Mbelata nke ngwaahịa na 62% dị n'etiti Nov-Dec 2016
Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-akwọ ụgbọala dị elu dịwanye mma site na 21%
Emepụtara "ellọ Ahịa Mattel," ọwa ahịa ndị ọzọ nke atọ iji chekwaa igbe ịzụta mgbe Mattel na-enweghị ngwaahịa, si otú a na-echekwa akara nha na njikwa nke ahụmịhe ndị ahịa.
Mgbe ị na-emeso ọtụtụ puku SKU gafee ọtụtụ ọwa, ịnwe ezigbo ngwaọrụ na data agbakọtara n'otu ebe na-enyere anyị aka ịmata kpọmkwem ebe iji mee ka mgbanwe gbanwee. '' - Erika Zubriski, Onye isi oche Sales, Mattel
Brandsdị ndị ọzọ na ndị na-ere ahịa na-eji Nchịkọta ọdịnaya gụnyere Walmart, P&G, Samsung, Levi's, L'Oreal na ndị ọzọ.
Tags: ọdịnaya ọdịnayacontent Marketingdamecommerce ọdịnayaKenji GjovigL'OrealLeviMattelP&Gpimibe ibeọdịnaya mkpọsaSamsungskulekwasịrịere ahịandị na-ere ahịaWalmart
Nov 27, 2017 na 11:49 PM
Na ụwa ahia dijitalụ enwere ọtụtụ ihe eji ere ahịa teknụzụ na-enyere anyị aka ito n'ihu. Ngwa ahia teknụzụ na - eme ka ihe dị mfe. Maka ọdịnaya anyị nwetara Buzzsumo, ụtọ asụsụ wdg. N'ihi Design anyị Lumen 5, stencil wdg ngwaọrụ. Maka HTML anyị nwere litmus, inkbrush. Maka ahia email anyi nwere Mailchimp. Maka Seo anyị nwere Href, rankwatch, Keyword Planner wdg. Maka nyocha anyị nwere nchịkọta Google. N'ihi na mmadụ mgbasa ozi anyị nwere Socio onwe, bitly, Maka oru ngo management anyị nwere slack, google ụgbọala wdg ngwaọrụ. Ngwaọrụ a niile na - arụ ọrụ dị mkpa na ụwa ahịa dijitalụ.